कोरियामा नेपाली प्राध्यापक
[2013-03-16 오전 11:48:00]
राजनीतिक द्वन्द्व एवं अस्थिरताका कारण नेपालको समाजकल्याण नीति संकटमा परिरहेका बेला प्राध्यापक नवराज पन्त भने विगत तीन वर्षदे खि कोरियाको गिम्छन विश्वविद्यालयमा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाको समाजकल्याण नीति अध्यापन गराइरहेका छन्। नेपालमा समाजकल्याणलाई कमाई खाने भाँडोका रूपमा हेरिन्छ अनि समाजकल्याण योजना भन्ने बित्तिकै बाहिरी सहयोगले चल्नु, चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ तर प्रा. पन्त त्यस्तो मान्यता सर्वथा गलत भएको बताउँछन्। उनी कुनै राष्ट्र समृद्ध हुन उक्त राष्ट्रको समाज कल्याण नीतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्।
अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्न प्रा. पन्तले धेरै आरोह-अवरोह पार गर्नुपरेको छ। चितवनमा जन्मि-हुर्किएर बीकम उतीर्ण गरेका पन्त गाउँकै गडौली माध्यमिक विद्यालयमा पढाउँदा पढाउँदै जापान गएर धन कमाउने लहडमा लहरिए २०४८ सालतिर। साथीभाइ, इष्ट मित्रले सहयोग गरेकाले केही दिनको तयारीपश्चात् जापानका लागि उडे। उक्त यात्राभर उनले भविष्यका हजारौं सपना साँचे अनि लाखौ कल्पना गरे। ती सपना र कल्पना जतिनै धेरै भए पनि कुनै दिन कोरियामा प्राध्यापक भएर पढाउँला र चितवनको पिप्ले चेपाङ बस्तीमा नयाँ सामुदायिक अभियान (सेमाउल उन्दोङ) सञ्चालन गरेर समाज उन्नतिको पथ प्रदर्शक बनौंला भनेर कल्पना भने गरेका थिएनन्, तर अहिले उनले कल्पना नगरेकै पद र पथमा जीवनका उर्वर समय खर्च गरिरहेका छन्।
जापानका लागि उडेका पन्तका सहयात्रीका रूपमा कोरियाको यान्से विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पार्क जुङ से थिए। यात्रा न हो सहयात्रीसँग औपचारिक चिनजान मात्र होइन, दुःखसुखका अनेक कुरा हुन्छन्। पन्त र प्राध्यापक से बीच पनि अनेक कुरा भए। औसत कोरियनहरू सहकमीर् को मनोविज्ञान छिटै थाहा पाउँछन् र त्यसअनुसार आफूलाई प्रस्तुत गर्छन्। पन्तको तीक्ष्ण बौद्धिकतालाई बुझेर प्राध्यापक से कोरिया पढ्न आउन निम्तो दिँदै हङकङबाट छुट्टिए। साता दिनको हङकङ बसाइले पन्तको सोचमा एकाएक परिवर्तन ल्यायो र प्राध्यापक सेको निमन्त्रणालाई एउटा अवसर सम्झँदै उनी कोरिया छिरे, तर पर्यटक भिसामा आएकाले विद्यार्थी बन्न नपाउने जानकारी पाएपछि उनी कम्पनीमा काम गर्न थाले।
विडम्बना कम्पनीमा काम सुरु गरेको ६ महिना नपुग्दै उनको दाहिने हात मेसिनले च्यापिएर हड्डीसम्म असर पर्‍यो र अढाई वर्ष लामो उपचार गर्नुपर्‍यो। उपचारका क्रममा उनले प्रवासी मजदुर हक-अधिकारका लागि आवाज उठाए। प्रवासी मजदुरहरूलाई संगठित बनाउनुको कारणचाहिँ पन्त दुर्घटनामा परेका बेला औद्योगिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति नियमलाई तात्कालीन सरकारले खारेज गरेकाले कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिएको थिएन, तसर्थ पन्तले तीन देशका १३ विदेशी मजदुरलाई साथमा लिएर १९९४ जनवरी ९ देखी फेब्रुअरी ८ सम्म आन्दोलन गरेका थिए। उक्त आन्दोलनका कारण सरकारले कानुन बहाली गरेको थियो। त्यो कानुनले केही हदसम्म कोरियामा प्रवासी मजदुरहरूको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको नियमअनुसार स्थापित गरेको छ। पन्तको भोगाइ अनि अनेक सास्तीलाई आधार बनाएर कोरियन कलाकार किम चेसु ङले १ ९९४ मा नमस्ते शीर्षकको नाटकसमेत लेखेका छन्। उक्त नाटकलाई त्यतिबेला पन्तकै निर्देशनमा पटक-पटक प्रदर्शन गरिएको थियो। सपना र कल्पना भन्दा पृथक धेरै खालका खोट र चोट बोकेर पन्त अन्तत नेपाल आमाको काखमा फर्किएका थिए।
कोरिया बसाइका क्रममा पन्तले यहाँको भाषा र संस्कृतिको गहिरो अध्ययन गरेका थिए भने तीन वर्षसम्म कोरियन अभिभावकसँग जीवन बिताएका थिए। त्यसैले पन्त कोरियन भाषा, संस्कृतिका सम्बन्धमा राम्रो ज्ञान पनि राख्छन्। कमाउन गए पनि खाली हात फर्किएका पन्तले आफूले आर्जन गरेको ज्ञानलाई नै ठूलो सम्पत्ति माने र त्यसको सदुपयोग गर्न थाले, कोरियन भाषी सरकारी पर्यटक गाइडका रूपमा। यो पेसाबाट कमाउने तृष्णा केही मेटिए पनि कोरियामा अध्ययन गर्ने तृष्णा मेटिएको थिएन, त्यसैले कमाउँदा-कमाउँदै २००२ मा पुन कोरिया आएर ख्यङ्ही विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न थाले। त्यहाँ उनले कोरियाली विकासमा नयाँ सामुदायिक अभियानको भूमिकाका सम्बन्धमा अध्ययन गरेका थिए। यो अभियान नेपालको विकास एवं सामाजिक उत्थानमा पनि उत्तिकै आवश्यक भएकाले सन् २००३ देखि ने पालमा पनि यो अभियान सञ्चालनमा आएको छ।
कोरियामा सन् १९३२ मा कीम योङ कीले 'काम नगर्ने भए बरु खाना नै नखाऊ' भन्ने नारासाथ सुरु गरेको यो अभियानलाई सन् १९७० अप्रिल २२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क जङ हीले सरकारी मान्यता दिएका थिए। यहाँको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने यो अभियानले 'गाउँको विकासबाट मात्र देशको विकास सम्भव हुन्छ' भन्ने मान्यतालाई समर्थन गर्छ। प्रा. पन्तकै सक्रियतामा नेपाली टोलीले यससम्बन्धी तालिम २००९ देखि दिँदै आएको छ भने नेपालमा हालसम्म चौधै अञ्चलका १ हजारभन्दा बढी नेपालीलाई यो तालिम दिइएको छ। यो अभियान नेपालमा स्थापना गर्न योगदान गरेकाले पन्तलाई कोरियाली मन्त्रीस्तरको सेमाउल एवार्ड पनि प्रदान गरिएको थियो।
स्नातकोत्तर तहमा सेमाउलसम्बन्धी गहन अध्ययन गरेका पन्तले सोही विश्वविद्यालयबाट पर्यटन व्यवस्थापनअन्तर्गत नेपाल, भारत, चीन, को रिया र जापान पाँच राष्ट्रको वृहद पर्यटन विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। नेपालमा पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहेकाले यसको प्रवर्द्धन गर्न उनले नेपाली प्रकृति, संस्कृति, जैविक विविधता र पुरातत्वसम्बन्धी २० वटाभन्दा बढी डकुमेन्ट्री कोरियाका एसबीएस, केबिएस तथा एमबिसी टेलिभिजनबाट प्रसारण गराएका छन्। नेपालको वृहद् पर्यटन विकासका लागि २००४ देखि चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती महोत्सवको सुरुवात उनैले गराएका हुन्। प्रत्येक वर्ष डिसेम्बरमा हुँदै आएको यो महोत्सवलाई अझ व्यवस्थित गर्न सके चितवनमा वाषिर्क १० लाख पर्यटक भित्रिने उनको ठहर छ।